Vol. 14 DISEMBA, 1911. 3
KUBantwana kuhlala kubaliswa ibali eliyintsomi ngesibini esikhulileyo esichithe ixesha elininzi sinqwenela. Ngelixa babehleli esitratweni sabo ngorhatya olunye, kwaye, njengesiqhelo, benqwenela le nto okanye ilele, kwavela ifanitshala yathi, besazi ukuba banqwenela njani ukuba iminqweno yabo yanelise ukuba uye wabanika nje iminqweno emithathu. Babonwabile kwaye bengathathi xesha lokuvavanya isithembiso sikaFan, indoda esele ikhulile, inika ilizwi kumnqweno wentliziyo okanye isisu sayo kwangoko, inqwenele ukuba ibe neeyadi ezintathu ezimnyama; kwaye, ngokuqinisekileyo, apho ezingubeni zakhe bekukho iiyadi ezintathu zepudding emnyama. Ixhegokazi, licaphukile ngenxa yokuchitha ngokuxabisekileyo ithuba lokufumana into ngokunqwenela kwayo, kunye nokubonisa ukungavisisani kwakhe nengcinga yendoda endala, yanqwenela ukuba lo mbala umnyama unamathele kwimpumlo yakhe, kwaye apho wanamathela. Esoyika ukuba ingaqhubeka apho, ixhego-linqwenela ukuba lihle. Kwaye yenzekile. Ifani yanyamalala kwaye ayibuyanga.
Abantwana xa besiva eli bali baziva becaphukile kwisibini esikhulileyo, kwaye benomsindo ekuphulukaneni nethuba elingaka, kanye njengokuba lalinjalo ixhego nomyeni walo. Mhlawumbi bonke abantwana abalivileyo ibali bacinge ngento abanokuyenza ukuba bebenazo ezi zinto zinqwenelekayo ezintathu.
Iintsomi ezingenantsingiselo ezinento yokwenza neminqweno, kwaye ubukhulu becala unqwenela, ziyinxalenye yeenkolelo zabantu phantse kulo lonke ugqatso. Abantwana kunye nabadala babo banokuthi bazibonele bona kunye neminqweno yabo eboniswe kwi "Goloshes of Fortune" ka-Hans Christian Andersen.
Iforum ibinee-goloshes ezinokwenza ukuba abo bazinxibileyo basihanjiselwe nakuphi na ixesha nendawo kunye naphantsi kwaziphi na iimeko kunye neemeko azinqwenelayo. Ijonge ukunika abantu ubuntu, i-Fairy ibeka i-goloshes phakathi kwabanye kwi-ante-gumbi lendlu apho iqela elikhulu laliqokelelene khona kwaye bephikisana ngombuzo wokuba amaxesha aminyaka yobudala aphakathi abengcono kunabo eyam.
Ekuphumeni kwendlu, u-ceba obethande iminyaka ephakathi wabeka ii-Goloshes zase-Fortune endaweni yeyakhe kwaye, esacinga ingxabano yakhe xa ephuma emnyango, wazinqwenela ngamaxesha kaKumkani uHans. Ukubuyela kwakhe wahamba iminyaka engamakhulu amathathu kwaye xa wayesiba uye wangena eludakeni, kuba ngezo ntsuku izitrato zazingagangwanga kwaye iindlela zendlela zazingaziwa. Oku kuyothusa, yatsho ikhansile, xa ingena dakeni, nangaphandle koko, izibane ziphume zonke. Wazama ukufumana into yokuba amthathe amse ekhaya, kodwa kwakungekho namnye owayenokubakho. Izindlu zaziphantsi kwaye zifulelwe. Akukho bhulorho ngoku yawela umlambo. Abantu benza ngokundilisekileyo kwaye benxibe ngendlela engaqhelekanga. Ucinga ukuba uyagula wangena endlwini yabahambi. Bambi abafundi bamqhubela incoko. Wayedidekile kwaye ekhathazekile kukubonakaliswa kwabo kokungazi, nayo yonke enye into awayeyibonile. Eli lelona xesha lingonwabisiyo ebomini bam, utshilo xa etsiba emva kwetafile kwaye wazama ukubaleka ngomnyango, kodwa inkampani imbambe ngeenyawo. Kwimizabalazo yakhe, goloshes zaphuma, kwaye wazifumana ekwisitrato esiqhelekileyo, kwaye kwiveranda apho umlindi elala ngokuvakalayo. Evuya ngokubaleka kwakhe ngexesha likaKumkani uHans, uceba wafumana i-cab kwaye wagxothwa ekhayeni lakhe ngokukhawuleza.
Molo, utshilo umlindi ekuvukeni, ilele iigorila ezimbini. Zilunge kangakanani na, utshilo, njengoko wayezilahlela. Emva koko wajonga efestileni kamakoti owayehlala kwigumbi eliphezulu, wabona ukukhanya kunye nebanjwa lihamba lisenyuka. Elinjani ukuba lihlabathi umhlaba lo, utshilo umlindi. Kukho i-lieutenant ihamba isenyuka kwigumbi layo ngeli lixa, xa kunokwenzeka ukuba ibengakwibhedi yakhe efudumeleyo ilele. Akanamfazi, nabantwana, kwaye unokuphuma ayonwabele ngokuhlwa. Indoda eyonwabileyo! Ndinqwenela ukuba bendinguye.
Umlindi waye wathuthelwa emzimbeni ngoko nangoko ecinga nge-lieutenant kwaye wafumanisa ukuba uyame efestileni kwaye ejonge kabuhlungu kwilungu lephepha elipinki awayebhale kulo umbongo. Wayenothando, kodwa wayehlwempuzekile kwaye engaboni ukuba umntu lowo ubenako ukujongana naye unokuphumelela. Wajongisa intloko yakhe ngokungathathi cala kwifestile yefestile kwaye wancwina. Inyanga yakhanya kumzimba womlindi ongezantsi. Ah, wathi, loo mntu wonwabe ngakumbi kunam. Akazi ukuba yintoni kanye kanye le ndiyifunayo. Unekhaya kunye nomfazi nabantwana ukuba bamthande, kwaye andinalo. Ngaba ndinganako kodwa ubuninzi bakhe, kwaye ndidlule ebomini ngeminqweno ethobekileyo kunye namathemba athobekileyo, kufanele ukuba ndonwabe ngakumbi kunokuba ndinjalo. Ndinqwenela ukuba ndibengumlindi.
Emva komzimba wakhe kwaya umlindi. Owu, liphupha elibi kangakanani eli, watshoyo, kwaye ukucinga ukuba ndingoyena mntu ungumfazi onetyala kwaye engenamfazi nabantwana bam kunye nekhaya lam. Ndiyavuya kuba ndingumlindi. Kodwa wayesenayo kwi-goloshes. Wakhangela esibhakabhakeni wabona inkwenkwezi ewayo. Yandula ke yajonga ngamehlo amangalisayo enyangeni.
Yeyiphi na indawo engaqhelekanga inyanga ukuba kuyo, Ndinqwenela ukuba ndibone zonke iindawo ezingaqhelekanga kunye nezinto ekufuneka zibelapho.
Ngomzuzwana wayehanjisiwe, kodwa waziva kakhulu engekho endaweni. Izinto zazingafani njengoko zinjalo emhlabeni, kwaye izidalwa zazingaqhelekanga, njengoko konke okunye, kwaye wayegula ekhululekile. Wayekwinyanga, kodwa umzimba wakhe wawuseverandeni awayeyishiyile.
Iyintoni na iyure, umlindi? ubuzile umntu odlulayo. Umbhobho uwile esandleni somlindi, ke akaphendula. Abantu babehlanganisene, kodwa babengenako ukumvusa; bamsa esibhedlele, kwaye oogqirha babecinga ukuba ufile. Ukulungiselela umngcwabo wakhe, into yokuqala eyenziwayo yayikukususa i-goloshes yakhe, kwaye, kwangoko umlindi wavuka. Ubusuku bunjani boyikisayo, utshilo. Ndinqwenela ukuba ndingaze ndibenawo omnye umntu. Kwaye ukuba uyekile ukunqwenela, mhlawumbi ngekhe enze.
Umlindi wahamba, kodwa wazishiya ngasemva i-goloshes. Ngoku, kwenzeka ukuba igosa elithile lokuvolontiya labeka iwashi lakhe esibhedlela ngobo busuku, kwaye nangona kwakunetha yayifuna ukuphuma ithutyana. Wayenganqweneli ukuba umgcini wecango esangweni azi malunga nokuhamba kwakhe, ngenxa yoko wacinga ukuba angatyibilika ngokuthulula ngentsimbi. Wabeka iigalufa kwaye wazama ukugqitha kwimijikelo. Intloko yakhe yayinkulu kakhulu. Ngelishwa, utshilo. Ndinqwenela ukuba intloko yam idlule ngokugwenxa. Kwaye kwenzeka, kodwa ke umzimba wakhe wawusemva. Apho wema, ukuzama njengoko wayenako, ubengenako ukuwufumana umzimba wakhe kwelinye icala okanye intloko yakhe ibuye ngomva. Wayengazi ukuba ii-goloshes awayezinxibe yayizii-Goloshes of Fortune. Wayekwimeko ebuhlungu, kuba imvula yayinzima kunangaphambili, kwaye wayecinga ukuba kuya kufuneka alinde iipilisi zentambo kwisigculelo kwaye agculelwe ngabantwana abanobubele kunye nabantu abaza kudlula ekuseni. Emva kokubandezeleka ngeengcinga ezinjalo, kunye nazo zonke iinzame zokuzikhulula zingqina ukuba ulilize, kwenzeka ukuba wayenqwenele intloko yakhe kwakhona; kwaye kwaba njalo. Emva kweminye iminqweno emininzi emenze ukuba angaphazamiseki, ivolontiya layikhupha iGoloshes ye-Fortune.
Ezi ntsholo zathatyathwa zasiwa kwisikhululo samapolisa, apho, ngempazamo yakhe, umabhalana owayeyicaphula wababeka wabakhupha apho. Emva kokuzinqwenelela imbongi kunye nencula, kwaye nokufumana iingcinga kunye neemvakalelo zembongi, kunye neemvakalelo zentengiso emasimini nasekuthinjweni, ekugqibeleni wanqwenela kwaye wazifumana etafileni yakhe ekhayeni lakhe.
Kodwa eyona Goloshes yaseThamsanqa yezisa kumfundi omncinci wezakwalizwi, otyhila emnyango weklabishi yokulingisa kusasa emva kwamava akhe okubhala kunye nelark.
Ngena, utshilo umabhalana okopelayo. Molo, utshilo umfundi. Kusasa oluzukileyo, kwaye ndingathanda ukuya egadini, kodwa ingca imanzi. Ndingafumana iigluos zakho? Ngokuqinisekileyo, utshilo unobhala wenkulumbuso, kwaye umfundi wazinxiba.
Kwigadi yakhe, umbono womfundi wayegcinwe ziindonga ezincinci ezazibiyile. Yayilusuku oluhle lwentwasahlobo kwaye iingcinga zakhe zajika zaya kumazwe awayelangazelela ukumbona, kwaye wakhala ngokungxama, esithi, Akwaba bendinokuhamba ngeSwitzerland, ne-Itali, kunye-. —— Kodwa wayenganqweneli ukuqhubeka, kuba wazifumana ekwinqanaba lomqeqeshi nabanye abahambi, kwiintaba zaseSwitzerland. Wayenxinekile kwaye egula ngokukhululeka kwaye esoyika ukuphulukana nepasipoti, imali kunye nezinye izinto, kwaye kubanda. Ayivumelani kwaphela, utshilo. Ndinqwenela ukuba sikwelinye icala lentaba, e-Itali, apho kushushu khona. Kwaye, ngokuqinisekileyo, babekho.
Iintyatyambo, imithi, iintaka, amachibi avela emasimini, iintaba zikhuphuka kwicala kwaye ziya kufikelela kumgama, kunye nelanga legolide liphumla njengezuko phezu kwayo yonke into, lenze umbono okhuthazayo. Kodwa lalinothuli, lifudumele kwaye linomswakama kumqeqeshi. Iimpukane kunye neentsini zabetha bonke abakhweli kwaye zabangela ukudumba okukhulu ebusweni babo; kwaye isisu sabo sasingenanto kwaye nemizimba yayityhafile. Abangabahambi nabasweleyo babangqungqa endleleni kwaye babalandela baya kwigumbi elingalunganga lababantu apho babemise khona. Kwawela kwiqashiso lomfundi ukujonga ngelixa abanye abakhweli belala, kungenjalo baphangiwe konke abenako. Ngaphandle kwezinambuzane kunye nephunga elalimcaphukisayo, umfundi wahlebeza. Ukuhamba kwakuya kuba kulungile, utshilo, ukuba ibingengomzimba womntu. Naphi na apho ndiya khona okanye nantoni na endinokuyenza, kusekho intswelo entliziyweni yam. Kumele ukuba ibe ngumzimba othintela ukufumana kwam oku. Ngaba umzimba wam uphumle kwaye ingqondo yam ikhululekile ndifanele ndithandabuze ukuba ndafumana injongo yolonwabo. Ndinqwenela isiphelo esona sonwabisayo.
Emva koko wazifumana esekhaya. Amakhethini ayetsalwa. Embindini wegumbi lakhe kwakukho ibhokisi. Walala kuyo ubuthongo bokufa. Umzimba wakhe uphumle kwaye umoya wakhe ukhula.
Kweli gumbi zazineefom ezimbini ezihamba ngokuzolileyo malunga. BabengamaNwabo oLonwabo awayeze neeGoloshes zeThamsanqa, kunye nenye ifani ebizwa ngokuba nguKhathalelo.
Uyabona, loluphi ulonwabo oluziswe yincoko yakho emadodeni? utshilo uKhathalelo.
Kodwa bamncedile olele apha, waphendula uFail loNwabo.
Hayi, utshilo uKhathalelo, wahamba yedwa. Khange abizwe. Ndiza kumenzela inceba.
Uyewasusa i goloshes ezinyaweni zakhe waphakama nomfundi waphakama. Kwaye i-fani yanyamalala kwaye yathatha ii-Goloshes ze-Fortune zaya nayo.
Ngethamsanqa ukuba abantu abanazo ii-Goloshes zethamsanqa, kungenjalo banokuzisa intlekele enkulu kubo ngokunxiba kwabo kwaye banelise iminqweno yabo kwangoko kunokuba umthetho siphila kuwo uvumele.
Xa abantwana, indawo enkulu yobomi bethu yathunyelwa ngokunqwenela. Kubomi bakamva, xa umgwebo kufuneka ukhule thina, njengasekudala nakwabanxibe i-goloshes, sichitha ixesha elininzi sinqwenela, ngokungoneliseki kunye nokuphoxeka, kwizinto esizifumeneyo nesazinqwenela, nokuzisola okungenamsebenzi. ngokunganqweneli enye into.
Ukunqwena kuyaziwa njengento engenamsebenzi, kwaye abaninzi bacinga ukuba iminqweno ayilandelwa zizinto abazifunayo kwaye ayinampembelelo ebomini babo. Kodwa ezi ziingcamango eziphosakeleyo. Ukunqwenela ukuba nempembelelo kubomi bethu kwaye kubalulekile ukuba sazi indlela ezinqwenela ngayo iimpembelelo kwaye zibazisele ngayo iziphumo zethu. Abanye abantu bachukunyiswa yiminqweno yabo kunabanye. Umahluko kwiziphumo zokunqwenelwa ngumntu omnye kwiminqweno yomnye kuxhomekeke kwimeko yokungakwazi ukwenza amandla okanye amandla achuliweyo engcinga yakhe, kumthamo kunye nomgangatho womnqweno wakhe, kwaye kwimvelaphi yeenjongo zakhe zangaphambili kunye neengcinga kunye nezenzo Yenza imbali yakhe.
Ukunqwenela umdlalo ngumbono ophakathi kwengqondo kunye nomnqweno wokujikeleza into ethile yomnqweno. Umnqweno ngumnqweno wentliziyo ovakalisiweyo. Ukunqwenela kwahlukile ekukhetheni kunye nokukhetha. Ukukhetha kunye nokukhetha into kufuna uthelekiso kwingcinga phakathi kwayo nenye into, kwaye ukhetho lubangela into ekhethwe ngokukhetha ezinye izinto ethelekiswe kuzo. Ngokunqwenela, umnqweno unyusa ingcinga kwinto ethile oyinqwenelayo, ngaphandle kokuma ukuyithelekisa nenye into. Umnqweno ocacisiweyo ngowento efunwa ngumnqweno. Umnqweno ufumana amandla awo kwaye uzalwe ngumnqweno, kodwa ingcinga inika isimo.
Lowo wenza ukucinga kwakhe ngaphambi kokuba athethe, kwaye othetha emva kokucinga kuphela, akangomnqweno wokunqwenela njengalowo uthetha ngaphambi kokucinga nentetho yakhe eyimpembelelo yeempembelelo zakhe. Ngapha koko, umntu osele emdala onamava kwaye oye wazuza kumava akhe wenza unqwenela kancinci. I-Novices kwisikolo sobomi, bonwaba kakhulu ngokubanqwenela. Ubomi babaninzi ziinkqubo zokunqwenela, kunye neempawu ezibalaseleyo ebomini babo, njengethamsanqa, usapho, izihlobo, indawo, isikhundla, iimeko kunye neemeko, ziindlela kunye neziganeko ngezigaba ezilandelelanayo njengeziphumo zokunqwenela kwazo.
Umnqweno unomdla kuzo zonke izinto ezibonakala zinomtsalane, njengokususa isiphako ekucingelwa ukuba unaso, okanye ukufumana isiphithiphithi, okanye ukuba ngumnini weendawo ezinkulu kunye nobutyebi, okanye ukudlala indima ebonakalayo phambi kwamehlo oluntu, kwaye konke oku ngaphandle kokufumana isicwangciso sokusebenza esifanelekileyo. Eyona minqweno ixhaphakileyo yileyo inxulumene nomzimba kunye neminqweno yenyama yayo, njengomnqweno wenqaku elithile lokutya, okanye ukufumana into ethambile, umnqweno weringi, ubucwebe, isiqwenga soboya, isinxibo, ingubo, ukwaneliseka yimvakalelo, ukuba nemoto, isikhephe, indlu; kwaye ezi zinto zinqwenelela abanye, ezinjengomnqweno wokuthandwa, ukuba nomona, ukuhlonitshwa, ukuba nodumo, kunye nokuphakama kwehlabathi ngaphezu kwabanye. Kodwa ngalo lonke ixesha umntu efumana into awayeyinqwenela, ufumanisa ukuba loo nto ayimkholisi ngokupheleleyo kwaye unqwenela enye into.
Abo banamava ngokuthanda izinto zehlabathi kunye nangokomzimba kwaye bazifumane zonwabile kwaye zinokuthenjwa nokuba zifunyenwe, banqwenela ukuba nochuku, ukuzibamba, ukuba nesidima kunye nobulumko. Xa umntu unqwenela ukuguqukela kwizifundo ezinjalo, uyeka ukunqwenela kwaye azame ukufumana ezi zinto ngokwenza oko ucinga ukuba kuya kukhulisa ukulunga kwaye kuzisa nobulumko.
Olunye uhlobo lomnqweno yinto engakhathalelwanga ubuntu bakhe kodwa inxulumene nabanye, njengokuthi unqwenele ukuba omnye umntu abuyise impilo yakhe, okanye ithamsanqa lakhe, okanye aphumelele kwelinye ishishini, okanye ukuba uya kufumana ukuzithiba kwaye ube nakho ukohlwaya imo yakhe kwaye akhulise ingqondo yakhe.
Zonke ezi ntlobo zeminqweno zinefuthe elithile kunye neempembelelo, ezimiselwe ngumthamo kunye nomgangatho womnqweno, ngomgangatho namandla eengqondo, namandla awanikwa zezi ngcinga zakhe zangaphambili kunye nezenzo ezibonakalisa umnqweno wakhe wangoku ngelixa elizayo.
Kukho indlela evulekileyo okanye yobuntwana yomnqweno, kunye nendlela eqolileyo kwaye ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yisayensi. Indlela evulekileyo yeyokuba umntu anqwenele loo nto ingena engqondweni yakhe aze ayibethe ngothamsanqa, okanye loo nto iphakanyisiwe kwingcamango yakhe ngeminqweno kunye neminqweno yakhe. Unqwenelela imoto, i-yacht, isigidi seedola, umzi omkhulu wedolophu, amazwe amakhulu kwilizwe, nangokukhululeka okufanayo xa efuna ibhokisi yee-cigar, kunye nokuba umhlobo wakhe uTom Jones uza kumhlawula tyelela ngokuhlwa. Akukho bunyani malunga nendlela yakhe evakalayo okanye yobuntwana yomnqweno. Umntu ozimiseleyo kulo unqwenela ukuba afune nayiphi na into enye nangenye into. Utsiba ukusuka kwelinye ukuya kwelinye ngaphandle kokuhlanganisana kwengcinga okanye indlela ekusebenzeni kwakhe.
Ngamanye amaxesha isilumko esiqhwethayo siya kubukela ngokungathi sisithuba, kwaye siqale kuloo mhlaba siqale ukunqwenela nokubukela ukwakhiwa kwebhotwe laso, size sinqwenele uhlobo olwahlukileyo lobomi ngesiquphe apho inkawu ixhonywe ngumsila wayo, isisonga Ukukhangela kwaye ujongeka ulumkile, uya kuthi xhaxhe kwilungu elilandelayo kwaye uqalise ukuncokola. Olu hlobo lomnqweno lwenziwa ngohlobo oluqinisekileyo lwendlela.
Umntu ozama ukusebenzisa indlela kumnqweno wakhe, uyazi ngokupheleleyo into ayifunayo nangoko anqwenela khona Njengobulumko obuvaliweyo, umnqweno wakhe unokuqala kwinto ayithandayo. Kodwa ngaye uya kukhula ekutsaleni kwayo ibe yimfuno eqinisekileyo. Emva koko uya kuqala ukulilangazelela, kwaye umnqweno wakhe uya kuhlala ekuzinqweneleleni okunqwenelekayo kunye nokunqwenela ngokuzinzileyo kunye nokufuna okufezekileyo komnqweno wakhe, ngokuhambelana nokubizwa kade kwesikolo esithile se-wishers enobuchule, "Umthetho Nge Opulence. ”Onobulumko onendlela ethile ihlala aqala ngokwenkqubo entsha, ethi, ukuchaza umnqweno wakhe kunye nokubiza kunye nokufuna komthetho wakhe wokuzonwabisa uzalisekise. Isibongozo sakhe kukuba kwindalo yonke kukho intabalala yezinto zonke, kwaye lilungelo lakhe ukumemeza ngobuninzi bayo yonke loo nxalenye ayithandayo kwaye ngoku afuna ibango.
Emva kokuvuma ilungelo lakhe kunye nebango uyaqhubeka nomnqweno wakhe. Oku akwenza ngokulamba ngokungagungqiyo nangokulangazelela ukwaneliseka komnqweno wakhe, nangokutsalwa ngokuzinzileyo komnqweno wakhe kunye nengcinga yokufumana indibaniselwano yendalo iphela, de abe lowo ubhubhayo ngokungakhathali kumnqweno wakhe ade azaliseke. Ayisiyonto ilumkileyo ngokuthe kratya, ngokwendlela entsha-yokucinga, anelise iminqweno yakhe, nangona kunqabile ukuba avele afumane into ebeyinqwenela, nangendlela afuna ngayo. Ngapha koko, indlela yokuza kwayo idla ngokubangela usizi oluninzi, kwaye unqwenela ukuba ubenganqweneli, kunokuba ahlupheke ngenxa yentlekele ebangelwa kukufumana lo mnqweno.
Umzekeliso wobudenge bokuzingisa komnqweno kwabo bathi bayazi kodwa bengawazi umthetho, ngulo ulandelayo:
Kwintetho malunga nokuba lilize kokunqwenela ngokungazi kwaye ngokuchasene nezo ndlela zokufuna nokunqwenela ezixhonywe uninzi lweenkolelo ezintsha, umntu owayemamele ngomdla wathi: "Andivumelani nesithethi. Ndiyakholelwa ukuba ndinelungelo lokunqwenela nantoni na endiyifunayo. Ndifuna nje amawaka amabini eedola, kwaye ndiyakholelwa ukuba ndiyaqhubeka ndiyinqwenela ukuyifumana. ”“ Mhlekazi, ”uphendule owokuqala,“ akukho mntu unokukuthintela ekunqwenela, kodwa ungangxami. Uninzi lube nesizathu sokuzisola ngokufuna kwabo ngenxa yeendlela ebebezifumene ngalo. ”Uvumile wathi,“ Andinguye umbono wakho. "Ndiyakholelwa kumthetho wokungaziphathi kakuhle. Ndiyazi nabanye abafuna umthetho ngalo, nangokobuninzi bendalo, ukuba iminqweno yabo izalisekisiwe. Andikhathali ukuba kwenzeka njani, kodwa ndifuna amawaka amabini eedola. Ngokuyinqwenela kwaye ndiyifuna, ndiyathemba ukuba ndiza kuyifumana. ”Kwiinyanga ezithile kamva wabuyela, kwaye, ephawula ubuso bakhe obukhathaleleyo, lowo ebethetha kuye wabuza:" Mama, usifumene? " Ndenze njalo, utshilo. "Ngaba wanelisekile kukunqwenela?" Ubuzile. “Hayi,” uphendule watsho. Kodwa ngoku ndiyazi ukuba into endiyinqwenelayo ibingengobulumko. ”Waphendula wathi,“ Kunjani? “Kulungile,” watsho. “Umyeni wam wayenomshuwalense ngobomi bakhe obungamawaka amabini eedola. I-inshurensi yakhe endiyifumeneyo. ”
(Ukugqitywa kwiphepha leJanuwari le-The Word.)